Kenya oo dacwad ka ka gudbisay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda Addunka oo Soomaali ah – Bandhiga
Kenya oo dacwad ka ka gudbisay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda Addunka oo Soomaali ah
Dowladda Kenya ayaa dacwad ka dhan ah Guddoomiyaha maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ u gudbisay isla maxkamaddaasi, iyadoo dalbanaysa in kiis dacwadeedka badda ee u dhexeeya Somalia iyo Kenya laga wareejiyo Guddoomiyaha maxkamadda Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo Soomaaliya u dhashay.
Warqaddan cabashada ah ee loo gudbiyay ICJ waxaa diray David Matsanga, oo ah Guddoomiyaha Pan African Forum, kaasoo muddo dheer lagu yaqaanay in uu ka ag dhowaa Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Matsanga oo reer Uganda ah ayaa wuxuu la taliye u soo noqday madaxweynihii Zimbabwe Robert Mugabe, wuxuuna sidoo kale dalal Afrikaan ah oo dhowr ah uu u noqday indha indheeye dhinaca doorashooyinka ah.
Wuxuu xusay Matsanga in maadaama Guddoomiyaha maxkamadda ICJ uu yahay nin Soomaali ah ay u muuqato in natiijada ka soo bixi doonta gal dacwadeedkaasi ay noqon karto mid dhinac u jan jeerta.
“Aad baan u danaynaynaa arrinta dacwadda Kenya iyo Soomaaliya, maadaama aan nahay dadkii u dhashay gobolka Bariga iyo Geeska Afrika” ayuu yiri Matsanga.
“Maadaama uu yahay nin Soomaali ah (Cabdulqawi) qalbigiisu wuxuu jiraa dhanka Soomaaliya, sidaa darteed haddaan nahay Pan African Forum waxaan u aragnaa in guddoomiyaha ICJ in uusan ku haboonayn arrinta u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya” ayuu sii raaciyay David Matsanga.
Waxa uu Matsanga ugu baaqay Kenya in aysan xaadirin maalinta ay dib u furmi doonto dhegeysiga kama dambeysta ah ee maxkamadda ee 9-ka bishan September haddii uu Cabdulqawi weli ka mid yahay Guddiga garsooraya dacwadda.
Maalinta Isniinta ah 9-ka September ayaa waxaa la dhegeysan doonaa kiiska Soomaaliya, halka maalinta Arbacada ah ee 11 September ay tahay maalinta la dhegeysan doono waxay la soo shir tagto Kenya